IGnome 40 sele ikhutshiwe kwaye ezi ziindaba zayo | Ubunlog
IGnome 40 sele ikhutshiwe kwaye ezi ziindaba zayo
Ubumnyama | | gnome
Emva kweenyanga ezintandathu zophuhliso kukhutshwa inguqulelo entsha yeGnome 40 kunokuba kuthelekiswa nohlobo lwangaphambili, ngaphezulu kwama-24 amawaka otshintsho olwenziwe, Abaphuhlisi abangama-822 bathathe inxaxheba kuphumezo.
Kuya kufuneka sikhumbule ukuba iprojekthi itshintshele kwisikimu sokubala amanani iinguqulelo, kuba endaweni yokuba ibe yinguqulelo engu-3.40, inguqulelo engu-40.0 ikhutshiwe, eyenze ukuba kube lula ukulahla inombolo yokuqala "3", elahlekelwe kukuhambelana kwayo ngexesha lenkqubo yangoku yophuhliso.
Iimpawu ezintsha eziphambili zeGnome 40
Umbutho womsebenzi ujongano luye lwahlengahlengiswa ngokubonakalayo, kuba ukuqhelaniswa nkqo kufakwe ethe nkqo endaweni ethe nkqo-Iidesika ezibonakalayo kwimowudi yokujonga ngokubanzi (Umsebenzi weSishwankathelo) ngoku zilungiswe ngokuthe tye kwaye ziboniswa njengekhonkco lokuqhubeka lokuskrola ukusuka ekhohlo ukuya ekunene.
Idesktop nganye eboniswe kwimowudi yokujonga ngokubanzi ibonisa ngokucacileyo iifestile ezikhoyo, ezixhotyiswe nge icon yesicelo kunye nesihloko esivela xa uzulazula ngaphezulu. Ukuhanjiswa okuguqulweyo kwimowudi yokujonga ngokubanzi kunye nakwindlela yokukhetha yesicelo (igridi yesicelo), kubonelelwe ngotshintsho olungenamthungo phakathi koluhlu lweenkqubo kunye needesktophu ezibonakalayo.
Ukuphuculwa kombutho womsebenzi phambi kokubek 'esweni iimvavanyo ezininzi, Xa uqwalasela ukuboniswa kwedesktop kuzo zonke izikrini, iswitshi yedesktop ngoku ikwaboniswa kuzo zonke izikrini, hayi eyona iphambili.
Isitayile esipheleleyo sigqibelele, Kuba imiphetho ebukhali irhangqiwe, imiphetho ekhanyayo ithanjisiwe, isitayile esisecaleni sidityanisiwe, kwaye ububanzi beendawo ezisebenzayo zokurola ziye zandiswa.
Uyilo lweenkqubo ezininzi, kubandakanya iifayile, iWebhu, iiDiski, iiFonti, iKhalenda, iiFoto kunye nokuGada kweNkqubo, Yenziwe ngokutsha ngohlobo olutsha luluhlu kunye nokutshintsha, kunye neekona ezijikeleziweyo zeefestile. I-GNOME Shell ibandakanya ukunikezelwa kwe-GPU yezithunzi, uhlaziyo lwesitayile se-avatar, kunye nenkxaso eyongezelelweyo yokuthinta isikrini.
Isicelo sokubonisa uqikelelo lwemozulu senziwe ngokutsha ngokutsha. Uyilo olutsha luxhasa ukulungelelaniswa konxibelelwano kutshintsho kubungakanani befestile kwaye kubandakanya iimbono zolwazi ezimbini: uqikelelo lweyure kwiintsuku ezimbini ezizayo kunye noqikelelo lweentsuku ezili-10.
Icandelo lokumiselwa kwebhodi yezitshixo kwisiqwalaselo liphuculwe: Ngoku iiparameter zomthombo wokufaka zisusiwe kwicandelo "loLwimi kunye nommandla" zaya kwicandelo le "Keyboard" elahlukileyo, eliqulathe zonke iisetingi ezinxulumene nebhodi yezitshixo, inkqubo yokuseta hotkey ihlaziyiwe kwaye yongezwa ngeendlela ezintsha zokumisela isitshixo soBumba kunye nokungena kwenye abalinganiswa.
KuMphathi weSicelo sokuFakwa, ukubonakala kweebhanile kuphuculwe isicelo kunye nokujikeleza kwayo okuzenzekelayo kunikezelwe, kunye neencoko zezincoko zokukhululwa zesicelo ngasinye zibonelela ngolwazi ngotshintsho lwamva nje.
Ingqondo yokusebenza kunye nohlaziyo itshintshiwe ukunciphisa ukubakho kwezikhumbuzi kunye ulwazi olongeziweyo malunga nomthombo wofakelo (Flatpak okanye iiphakheji zokuhambisa). Umbutho wokunikezelwa kolwazi malunga neephakeji ezintsha uhlengwe ngokutsha.
Olunye utshintsho olwahlukileyo:
Ukuhambelana kweXWayland kuphuculwe kumphathi wokubumba weMutter.
Isikhangeli se-Epiphany sinika ubeko lwethebhu entsha kunye nokukwazi ukuskrola ngokukhawuleza kwiithebhu.
Iibhloko ezintsha ezivelelayo zongezwe kwisoftware yeMephu ye-GNOME ukubonisa isishwankathelo solwazi lwendawo yeWikipedia.
Uphuculo lomdibaniso wokusebenzisa isitshixo soQamba: ulandelelwano ngoku lubonisa njengoko uchwetheza.
Kumbonisi woxwebhu, kwimbonakalo efanayo yamaphepha amabini ngexesha, i-bar esecaleni ibonisa izipikili ezibini.
Ndifuduselwe kwisebe le-GTK 4.
Okokugqibela, kubalulekile ukukhankanya ukuba ukukhutshwa okuphakathi kokulungiswa kuya kuthunyelwa njenge-40.1, 40.2, 40.3, ezona zinto ziphambili ziya kukhutshwa ziya kuqhubeka rhoqo kwiinyanga ezi-6. Amanani odd awasadibaniswa nezilingo, ngoku ezibizwa ngokuba yi-alpha, beta, kunye ne-rc.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Iidesika » gnome » IGnome 40 sele ikhutshiwe kwaye ezi ziindaba zayo
I-KDE Plasma 5.22 izakwazisa iphepha elitsha lokuseta ngokukhawuleza kwaye iyaqhubeka nokuphucula idesktop
Sleek, uluhlu lwezinto eziza kwenziwa ezakhelwe nge-Electron